समारोह माग - एक वक्र व्यक्तिगत उत्पादन समूहहरूको लागि पनि यो प्रभावित कारक को एक नम्बर मा आकार आवश्यकताहरु आधारमा भिन्न हरेक बिन्दु जो। त्यहाँ आर्थिक अवधारणाहरु अर्को व्याख्या छ। उहाँलाई अनुसार, माग समारोह - एक आपसी निर्भरता कि यसको लागि वस्तु र उपभोक्ता मांग को मूल्य बीच अवस्थित छ। यस मामला मा, अन्य कारक स्थिर हुन मानिन्छ।
जो तथ्याङ्क को गणितीय विधिहरू प्रयोग आफ्नो आवेदन फेला मोडेल उपभोक्ता मांग आधारित निर्माण मा, मूल्य कारक, साथै जनसंख्याको आय को स्तर बारेमा जानकारी को प्रक्रिया मा प्राप्त डाटा। विचार पनि दिइएको छ:
- उपभोक्ता र टिकाउ सामान प्रयोग गर्न सम्बन्धित वस्तुहरु प्रयोग को समय को उपस्थिति मा डाटा;
- परिवार को संरचना;
- फर्नीचर खरीद, आदि को लागि मांग को अस्तित्व को आधार छ आवास निर्माण, को मात्रा
सबैभन्दा अक्सर मा आर्थिक सिद्धान्त प्रयोग एकल-कारक माग प्रकार्य। तिनीहरूले प्राप्त आय को स्तर को घरेलू आवश्यकता को निर्भरता झल्काउँछ। यो डाटा देखि निर्माण को रेखांकन, घटता E.Engelya नाम हो - जो उनको गुण अध्ययन जर्मन वैज्ञानिक पछि।
को सामान्यिकृत रूप मा मांग समारोह माग वा औसत विभिन्न सामान को खपत को मात्रा को प्रत्यक्ष निर्भरता व्यक्त जनसंख्याको आय। वर्ण डाटा घटता अनुसार विद्यमान मापदण्डहरू संग परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तसर्थ, proportionality आवश्यकता र आय वृद्धि गर्न विषय, त्यहाँ मांग को एक रैखिक समारोह छ। तेर्सो अक्ष एक्स-चार्ट बनाउन परिवारमा को नगद मा परिवर्तन को राशि झल्काउँछ। (ठाडो) को ordinate हामी मांग को मात्रा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन लाइन छ। विद्यमान संकेतक को प्रयोगबाट परिणामस्वरूप लगभग एक सीधा लाइन हुनेछ। एक समारोह जस्तै एउटा उदाहरण निर्भर खर्च र जामुन र फल मा कामदारहरूको र कर्मचारीहरु को आय, तयार बनाएको लुगा र बुना भयो कपडा, साथै समुद्री हुन सक्छ।
एक तीव्र द्वारा विशेषता छ कि एक सम्बन्ध पनि छ वृद्धि आय मा एक समग्र वृद्धि संग कुनै खास उत्पादन समूहको लागि मांग मा। यो समारोह को ग्राफ एक convex वक्र को फारम छ।
आर्थिक सिद्धान्त मानिन्छ र मांग को एक निश्चित संतृप्ति मा हुन्छ कि धन को संख्या मा वृद्धि देखि संचय माग। यो निर्भरता को ग्राफ एक concave वक्र फारम को रूप छ।
को दिल मा बजार संयन्त्र अर्थव्यवस्था को एक समारोह छ आपूर्ति र माग को। जनसंख्याको बढ्दो आवश्यकता वृद्धि वा केही सामान को उत्पादन सुरु गर्न एक निर्माता को लागि एक जरूरी छ। माग आपूर्ति गर्ने घरेलू उत्पादन, आफ्नो गुणस्तर र वर्गीकरण सूची लागि आवश्यक सिर्जना गर्छ। सुविधा प्रस्ताव उपभोक्ताहरु र उत्पादकहरु संगत गर्न सक्ने क्षमता र आफ्नो बिक्री समाप्त उत्पादनहरु को खरीद छ। माग मा वृद्धि संग माल को रिलीज मा वृद्धि छ। जबकि निरन्तर निर्मित उत्पादन गुणस्तर सुधार र यसको निर्माण लागत कम। यो प्रस्ताव को संख्या मा वृद्धि गर्न जान्छ।
उपभोक्ता बजार मा ब्यालेन्स हासिल गर्न को लागि एक आवश्यक अवस्था छ बजार अनुसन्धान। यो धेरै विभाग मा अप खण्डन:
- कार्यान्वयन (सन्तुष्ट);
माग त्यहाँ कुनै पनि वस्तु समूह, वाणिज्य मा उपलब्ध छ जो एक स्थिर बिक्री छ जहाँ मामला मा लागू गरिएको छ। Unmet आवश्यकता यसलाई अपर्याप्त हुँदा एक निश्चित उत्पादन किन्न जनसंख्याको धन को उपस्थिति देखि उत्पन्न।
सेवा र प्रदर्शन गुणस्तर
जब प्रबन्धकको रूस मा दिन? हामी सिक्न!
आफ्नो बच्चा खुजली छ भने के गर्ने?
म हार्ड ड्राइभ को प्रदर्शन मा कसरी जाँच गर्छन्: सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका को दुई